Romafo 3 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
3 Ɛnde dɛn na Yudani+ de kyɛn so, anaa dɛn ne twetiatwa so mfaso?+ 2 Ɛdɔɔso wɔ akwan nyinaa so. Nea edi kan no, wɔn na wɔde Onyankopɔn nsɛm kronkron no hyɛɛ wɔn nsa.+ 3 Enti asɛm no ne dɛn? Sɛ ebinom ankyerɛ gyidi+ a, so gyidi a wonni no betumi ama Onyankopɔn nokwaredi+ ayɛ kwa?+ 4 Ɛrentumi mma saa da! Na mmom momma Onyankopɔn nyɛ ɔnokwafo,+ ɛwom, onipa biara bɛyɛ ɔtorofo,+ sɛnea wɔakyerɛw sɛ: “Nea ɛbɛyɛ a wubedi bem wo nsɛm mu, na sɛ wobu wo atɛn a woadi nkonim.”+ 5 Nanso sɛ teɛ a yɛnteɛ ma Onyankopɔn trenee+ da adi a, dɛn na yɛbɛka? Sɛ Onyankopɔn yi n’abufuw adi a, ɛkyerɛ sɛ ɔnteɛ+ anaa? (Mekasa te sɛ onipa.+) 6 Ɛrentumi mma saa da! Anyɛ saa a anka Onyankopɔn bɛyɛ dɛn abu wiase atɛn?+ 7 Nanso sɛ m’atoro ama Onyankopɔn nokware+ ada adi yiye ma ahyɛ no anuonyam a, adɛn nti na me nso wɔrebu me atɛn sɛ ɔdebɔneyɛfo?+ 8 Ɛnde dɛn nti na yɛnnka nea wɔka to yɛn so+ ne nea nkurɔfo kyerɛ sɛ yɛka no sɛ: “Momma yɛnyɛ nnebɔne, na nnepa no aba”?+ Atɛn a wobu+ nnipa a wɔte saa no teɛ.+ 9 Ɛnde asɛm no ne dɛn? So yɛkyɛn afoforo?+ Ɛnte saa koraa! Efisɛ yɛadi kan aka sɛ Yudafo ne Helafo nyinaa wɔ bɔne mu;+ 10 sɛnea wɔakyerɛw sɛ: “Ɔtreneeni biara nni hɔ, obiako mpo nni hɔ;+ 11 obiara nni nhumu biara, obiara nni hɔ a ɔhwehwɛ Onyankopɔn akyi kwan.+ 12 Nnipa nyinaa afom kwan, wɔn nyinaa adan ahuhufo; obiara nni hɔ a ne yam ye, obiako pɛ mpo nni hɔ.”+ 13 “Wɔn menewa yɛ ɔdamoa a ano abue, wɔde wɔn tɛkrɛma akeka nnaadaasɛm.”+ “Nhurutoa bɔre wɔ wɔn anom.”+ 14 “Nnome ne nsɛm a ɛyɛ yaw ahyɛ wɔn anom mã.”+ 15 “Wɔn nan yɛ hare hwie mogya gu.”+ 16 “Ɔsɛe ne ahohia wɔ wɔn akwan so,+ 17 na wonnim asomdwoe kwan.”+ 18 “Onyankopɔn ho suro nni wɔn ani so.”+ 19 Yenim sɛ biribiara a Mmara+ no ka no, ɛka kyerɛ wɔn a wɔhyɛ Mmara no ase sɛnea ɛbɛyɛ a wobemua obiara ano+ na wiase nyinaa abɛyɛ+ wɔn a Onyankopɔn asotwe sɛ wɔn.+ 20 Enti wɔremfa mmara nnwuma mmu ɔhonam biara bem+ n’anim, efisɛ mmara+ na ɛma wohu bɔne yiye.+ 21 Nanso seesei ɛnyɛ mmara na wɔde ayi Onyankopɔn trenee+ adi, na Mmara+ no ne Adiyifo+ no dii ho adanse saa;+ 22 yiw, Onyankopɔn trenee a ɛnam Yesu Kristo mu gyidi so+ a ɛwɔ hɔ ma wɔn a wɔwɔ gyidi+ nyinaa. Nsonsonoe biara nni wɔn mu.+ 23 Wɔn nyinaa ayɛ bɔne+ na wonnu Onyankopɔn anuonyam ho,+ 24 na ɛyɛ akyɛde+ ara kwa sɛ wɔnam Kristo Yesu agyede+ no so abu wɔn bem wɔ n’adom+ mu. 25 Onyankopɔn de no sii hɔ sɛ mpatade+ denam ne mogya mu gyidi so.+ Ɔyɛɛ saa na ɔde ada n’ankasa trenee adi, efisɛ ɔde bɔne a wɔayɛ atwam no firii,+ bere a Onyankopɔn nyaa abotare+ no; 26 sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛda n’ankasa trenee+ adi wɔ saa bere yi mu, na ama wayɛ treneeni bere a obu onipa a ɔwɔ Yesu mu gyidi bem+ no. 27 Ɛnde ahohoahoa no wɔ he?+ Wɔayi afi hɔ. Ɛnam mmara bɛn so?+ Nnwuma so anaa?+ Dabida, na mmom ɛnam gyidi mmara+ so. 28 Yehu sɛ wɔnam gyidi so na ebu onipa bem, na ɛnyɛ mmara nnwuma so.+ 29 Anaasɛ ɔyɛ Yudafo nkutoo Nyankopɔn?+ So ɔnyɛ amanaman mufo nso de bi?+ Yiw, ɔyɛ amanaman mufo nso de,+ 30 efisɛ ɛyɛ ampa sɛ Onyankopɔn yɛ biako,+ na obegyina gyidi so abu twetiafo+ bem na wagyina momonotofo+ gyidi so abu wɔn bem. 31 Ɛnde so yɛde yɛn gyidi gu mmara anaa?+ Ɛrentumi mma saa da! Mmom no, yɛma mmara gyina.+